Intel က Server ကို Processor များ-Intel®Xeon®ပရို 3000 အစဉ်အတိုင်းလိုက်ခြင်း | OS ကို-STORE ဘလော့ခ်
စက်တင်ဘာလ 30, 2015 မောင်းသူ CPU ကိုပရို 0
# core ၏
processor ကိုဂရစ်ဖစ် ‡
(12M ကကက်ရှ်, 3.46 GHz အမြန်နှုန်း, 6.40 GT/s Intel® QPI) ဘဝအသက်တာ၏အဆုံး Q1’116130 ဒဗလျူ
(12M ကကက်ရှ်, 3.33 GHz အမြန်နှုန်း, 6.40 GT/s Intel® QPI) ဘဝအသက်တာ၏အဆုံး Q1’106130 ဒဗလျူ
(12M ကကက်ရှ်, 3.20 GHz အမြန်နှုန်း, 4.80 GT/s Intel® QPI) ဘဝအသက်တာ၏အဆုံး Q3’106130 ဒဗလျူ
(8M ကကက်ရှ်, 3.33 GHz အမြန်နှုန်း, 6.40 GT/s Intel® QPI) ဘဝအသက်တာ၏အဆုံး Q3’094130 ဒဗလျူ
(8M ကကက်ရှ်, 3.20 GHz အမြန်နှုန်း, 6.40 GT/s Intel® QPI) ဘဝအသက်တာ၏အဆုံး Q1’094130 ဒဗလျူ
(8M ကကက်ရှ်, 3.20 GHz အမြန်နှုန်း, 4.80 GT/s Intel® QPI) ဘဝအသက်တာ၏အဆုံး Q4’094130 ဒဗလျူ
(8M ကကက်ရှ်, 3.06 GHz အမြန်နှုန်း, 4.80 GT/s Intel® QPI) ဘဝအသက်တာ၏အဆုံး Q3’094130 ဒဗလျူ
(8M ကကက်ရှ်, 2.93 GHz အမြန်နှုန်း, 4.80 GT/s Intel® QPI) ဘဝအသက်တာ၏အဆုံး Q1’094130 ဒဗလျူ
(8M ကကက်ရှ်, 2.80 GHz အမြန်နှုန်း, 4.80 GT/s Intel® QPI) ဘဝအသက်တာ၏အဆုံး Q1’104130 ဒဗလျူ
(8M ကကက်ရှ်, 2.66 GHz အမြန်နှုန်း, 4.80 GT/s Intel® QPI) ဘဝအသက်တာ၏အဆုံး Q1’094130 ဒဗလျူ
(8M ကကက်ရှ်, 3.06 GHz အမြန်နှုန်း) စတင် Q2’10495 ဒဗလျူ
(8M ကကက်ရှ်, 2.93 GHz အမြန်နှုန်း) စတင် Q3’09495 ဒဗလျူ
(8M ကကက်ရှ်, 2.80 GHz အမြန်နှုန်း) စတင် Q3’09495 ဒဗလျူ
(8M ကကက်ရှ်, 2.66 GHz အမြန်နှုန်း) စတင် Q3’09495 ဒဗလျူ
(8M ကကက်ရှ်, 2.53 GHz အမြန်နှုန်း) စတင် Q3’09495 ဒဗလျူ
(8M ကကက်ရှ်, 2.40 GHz အမြန်နှုန်း) စတင် Q3’09495 ဒဗလျူ
(8M ကကက်ရှ်, 1.86 GHz အမြန်နှုန်း) စတင် Q3’09445 ဒဗလျူ
(4M ကကက်ရှ်, 2.26 GHz အမြန်နှုန်း) ဘဝအသက်တာ၏အဆုံး Q1’10230 ဒဗလျူ
(12M ကကက်ရှ်, 3.16 GHz အမြန်နှုန်း, 1333 MHz FSB) ဘဝအသက်တာ၏အဆုံး Q1’09495 ဒဗလျူ
(12M ကကက်ရှ်, 3.00 GHz အမြန်နှုန်း, 1333 MHz FSB) ဘဝအသက်တာ၏အဆုံး Q3’08495 ဒဗလျူ
(12M ကကက်ရှ်, 2.83 GHz အမြန်နှုန်း, 1333 MHz FSB) ဘဝအသက်တာ၏အဆုံး Q1’08495 ဒဗလျူ
(12M ကကက်ရှ်, 2.66 GHz အမြန်နှုန်း, 1333 MHz FSB) ဘဝအသက်တာ၏အဆုံး Q1’08495 ဒဗလျူ
(6M ကကက်ရှ်, 2.66 GHz အမြန်နှုန်း, 1333 MHz FSB) ဘဝအသက်တာ၏အဆုံး Q3’08495 ဒဗလျူ
(6M ကကက်ရှ်, 2.50 GHz အမြန်နှုန်း, 1333 MHz FSB) ဘဝအသက်တာ၏အဆုံး Q1’08495 ဒဗလျူ
(12M ကကက်ရှ်, 2.83 GHz အမြန်နှုန်း, 1333 MHz FSB) ဘဝအသက်တာ၏အဆုံး Q1’09465 ဒဗလျူ
(8M ကကက်ရှ်, 2.66 GHz အမြန်နှုန်း, 1066 MHz FSB) စတင် Q3’07495 ဒဗလျူ
(8M ကကက်ရှ်, 2.40 GHz အမြန်နှုန်း, 1066 MHz FSB) စတင် Q1’074105 ဒဗလျူ
(8M ကကက်ရှ်, 2.13 GHz အမြန်နှုန်း, 1066 MHz FSB) စတင် Q1’074105 ဒဗလျူ
(6M ကကက်ရှ်, 3.00 GHz အမြန်နှုန်း, 1333 MHz FSB) ဘဝအသက်တာ၏အဆုံး Q1’09245 ဒဗလျူ
(6M ကကက်ရှ်, 3.16 GHz အမြန်နှုန်း, 1333 MHz FSB) ဘဝအသက်တာ၏အဆုံး Q3’08265 ဒဗလျူ
(6M ကကက်ရှ်, 3.00 GHz အမြန်နှုန်း, 1333 MHz FSB) ဘဝအသက်တာ၏အဆုံး Q1’08265 ဒဗလျူ
(4M ကကက်ရှ်, 2.66 GHz အမြန်နှုန်း, 1066 MHz FSB) စတင်265 ဒဗလျူ
(4M ကကက်ရှ်, 2.33 GHz အမြန်နှုန်း, 1333 MHz FSB) စတင် Q4’07265 ဒဗလျူ
(4M ကကက်ရှ်, 2.40 GHz အမြန်နှုန်း, 1066 MHz FSB) စတင်265 ဒဗလျူ
(2M ကကက်ရှ်, 2.13 GHz အမြန်နှုန်း, 1066 MHz FSB) စတင်265 ဒဗလျူ
(2M ကကက်ရှ်, 1.86 GHz အမြန်နှုန်း, 1066 MHz FSB) စတင်265 ဒဗလျူ
Intel®ပရိုဆက်ဆာအများအပြားဓာတ်သတ္တု ~ မှီခိုထုတ်ကုန်များ၏နှလုံးမှာ. ကျနော်တို့နေတဲ့ခြားနားချက်ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်ယုံကြည်, အတူတူကျွန်တော်တို့ရဲ့မိတ်ဖက်နှင့်အတူ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထောက်ပံ့ရေး chain.Where မှအကြမ်းဖက်မှုများကိုရန်ပုံငွေထောက်ပံ့နေသည်ဟုပြောဆိုနေပဋိပက္ခသတ္တုဓာတ်ဖယ်ရှားပစ်ရန်လုပ်ဆောင်နေအားဖြင့်သာငါဆုံးပြီးပြည့်စုံစာရွက် Intel အမျိုးအစားနှင့်မော်ဒယ် -os-store ကိုရှာတှေ့နိုငျ.
OS ကို-STORE အားဖြင့်.
Intel က Server ကို Processor များ-Intel®Xeon®ပရို E3 မိသားစု
Intel ကဆာဗာလုပ်ငန်းရှင်များ-Intel®Xeon®ပရို E5 မိသားစု
Intel က Server ကို Processor များ-Intel®Xeon®ပရို E3 v2 မိသားစု
Intel ကဆာဗာလုပ်ငန်းရှင်များ-Intel®Xeon®ပရို E5 v2 မိသားစု
Intel က Server ကို
မိုဘိုင်းဖုန်း OS ကို-STORE HTC က ကားမောင်းသူထောက်ခံမှု Technology_Internet နည်းပညာ Intel က ဥပဒေရေးရာအနက် device ကိုမော်ဒယ် စီပီယူ Samsung က ပြည်သူ့ရည်ရွယ်ချက် HD Graphics Nokia က စီးရီးယာဉ်မောင်းပံ့ပိုးမှု စက်ပစ္စည်းကိရိယာမန်နေဂျာ 64-နည်းနည်းက Windows ပရိုဆက်ဆာ processor ​​ကို Software များ
64-နည်းနည်းက Windows စီပီယူ နည်းပညာ စက်ပစ္စည်းကိရိယာမန်နေဂျာ Software များ Samsung က စမတ်ဖုန်းများ Intel က စီးရီးယာဉ်မောင်းပံ့ပိုးမှု Qualcomm မှ ကားမောင်းသူထောက်ခံမှု Sony Ericsson က Technology_Internet ဥပဒေရေးရာအနက် HTC က Samsung ရဲ့ Galaxy မိုဘိုင်းဖုန်း processor ​​ကို ပရိုဆက်ဆာ ပြည်သူ့ရည်ရွယ်ချက် Intel က Server ကို device ကိုမော်ဒယ် HD Graphics Nokia က OS ကို-STORE